Ny Torolàlana ho an'ny Marketer hahatongavana ho Trust Flow ™ Pro | Martech Zone
Ny roa taona lasa dia nitondra fanovana maro tamin'ny marketing. Hitanay ny lehibe miroso mankany amin'ny finday, kapila vaovao ho an'ny atiny mavitrika ary a fanambadiana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny varotra. Fa ny iray amin'ireo fivoaran'ny seismika indrindra dia ny habaka SEO.
Tamin'ny 2013, nanambara i John Mueller fa tsy hanavao ny PageRank intsony i Google (Toolbar PageRank), ny rafitr'izy ireo ho an'ny laharam-pejy web miorina amin'ny sanda. Ary tsy nanao izany. Fa kosa, manana mpiambina vaovao ao an-tanàna isika: trust flow ™.
Noforonin'i SEO lehibe, fitokisana™ dia metric vaovao mamaritra ny kalitaon'ny tranokala mifototra amin'ny fifandraisany amin'ireo tranokala hafa eo amin'ny tsanganana, na ny ampahan'ny fahaizany. Ity fampitomboana ny fanamafisana ny rohy avo lenta sy ny laharam-pahamehana ity dia dingana iray lehibe amin'ny famoronana ny tontolon'ny fikarohana mifototra amin'ny sanda noheverin'i Google ho an'ny Internet maoderina.
Ohatra amin'ny tranokala tsara amin'ny onjam-pitokisana
Ireo fanovana ireo, amin'ny ankapobeny, dia tsara ho an'ny indostria misy antsika. Voalohany, manalavitra anay amin'ny fomba fanaon'ny sekoly taloha ny famenon-teny lakile izy ireo - amin'ny ankapobeny, ny famoahana pejy web misy teny lakile na isa ho fika hanodinkodinana ny laharan'ny tranokala amin'ny valin'ny karoka Google. Faharoa, ny tontolon'ny kalitao tsy dia misy fambolena amin'ny fifampitokisana ™ dia mifantoka amin'ny mpampiasa, ary mitovy amin'ny mpanjifa mahazo izay ilainy amin'ny ezaka varotrao.
Mazava ho azy fa fironana mendrika ny bandwagon ny fidirana fitokisana ™. Saingy, ahoana no fomba hampiasanao azy ho anao sy ny paikadin'ny marika? Mba hanampiana azy dia namorona torolàlana ho an'ny mpivarotra haingana izahay, feno toro-hevitra dimy mora hanohanana anao amin'ny fitetezana ny tontolon'ny SEO vaovao, ary hahazoana antoka fa mifandray amin'ny tranokala marketing hafa nomerika avo lenta ny tranonkalanao.
Soso-kevitra 1: Atsangano amin'ny votoatin'ny atiny famoronana sy fanao manokana ny paikadinao.
Fantatsika rehetra fa ny famokarana atiny tsy tapaka dia ambony amin'ny lisitry ny fitakian'i Google, saingy ny famoronana atiny misy ifandraisany sy lohahevitra no zava-dehibe kokoa.
Amin'ny alàlan'ny famoronana atiny ho an'ny tsenanao (izany hoe fandefasan-kafatra izay misy lohahevitra sy mifandraika amin'ny filan'izy ireo), ireo mpampiasa misimisy kokoa dia hitsidika ny tranokalanao, ary hankafy ny isa feno fahefana amin'ny lohahevitra manokana resahina ianao. Arakaraka ny maha avo ny fitokisanao ™ (na ny kalitaon'ny backlinking) no mahamety anao kokoa amin'ny Google. Raha zohina, ity no fomba Google hanamarinana ireo loharanom-pahalalana manam-pahaizana ary hametraka azy ireo eo akaikin'ny tampon'ny fikarohana ho hitan'ny mpamaky.
Mamorona atiny vaovao sy be fampahalalana, ary hahazo backlinks manan-pahefana ianao. Ny lahatsoratry ny vahiny dia ohatra iray tsara amin'ny fomba fiasan'izany. Izy io dia dingana biolojika izay mitaky fotoana sy paikady maharitra, saingy manorina fototra mafy orina ho an'ny marikao izy ary mendrika ny fiezahana tokoa.
Soso-kevitra 2: manaova fampiasa teny fanalahidy tsara.
Taorian'ny fanovana ny atiny kalitao sy ny fanajanonana ny rohy, ny mpivarotra sasany dia nanambara fa maty ny teny lakile. Fa raha ny marina dia zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny fampiharana fampiasana teny lakile tsara - fampiasana teny mifanentana amin'ny akany sy ny mpihaino anao.
Raha vao manomboka ny paikadinao SEO-centric keyword voalohany ianao dia atombohy amin'ny fenitra volamena. Google Ads mitohy ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanampiana anao hahita ny teny fanalahidy be indrindra, ary hitondra ny kalitaon'ny kalitao indrindra. Atambatra miaraka a vahaolana fisamborana data, ary tsy hoe hanana angon-drakitra matanjaka momba ny vinavinanao eo am-pelatananao ianao - ho fantatrao aza izay mitondra azy ireo ao amin'ny tranonkalanao.
Soso-kevitra 3: manohiza manaraka ny lalàna efa notsapaina sy marina raha ny momba ny meta tag, ny famaritana ary ny fotoana fandefasana haingana.
Ny fitsipika taloha momba ny meta tag, ny famaritana ary ny fotoana fandefasana haingana dia mbola mitondra lanja ihany. Ny mari-pamantarana sy ny lohateny dia manangana kalitao sy fahefana ao amin'ny tranokala ary misy ifandraisany amin'ny lohahevitra, izay mitovy amin'ny onjam-pitokisana tsara ™.
Soso-kevitra 4: Ataovy mora amin'ny mpampiasa anao ny mahita izay ilainy.
Mamorona singa misy temotra ao amin'ny tranokalanao izay ahafahan'ny mpampiasa mahita toerana mora foana amin'ny fampahalalana na famandrihana. Tsy ny taktika ihany no hiteraka fahalianana amin'ny fahitana - fa hampitombo ny fifanakalozana sy hampihena ny tahan'ny fihenjanana, singa lehibe amin'ny famaritana ny Topical Trust Flow ™.
Soso-kevitra 5: Tohizo ny fandrefesana ny lisitry ny zavatra tokony hataonao.
Amin'ny maha mpivarotra azy, ny fandrefesana no lakilen'ny fampisehoana ny fahombiazantsika - ary ny tena zava-dehibe, ny fanaovana tahaka ny ezaka ataontsika amin'ny ho avy. Toy ny PageRank, ny flow trust ™ dia azo ary tokony refesina. Andramo ireto safidim-pitadiavana fidirana maimaim-poana ™ ireto, anisan'izany ny add-on ho an'ny Google Chrome ary Firefox, ary tranokala SEO Checker's Citation Flow sy Trust Flow Checker.
Tags: kalitaon'ny rohyrohyseo be voninahitrafitokisana
Soa azo avy amin'ny programa tsy fivadihana ho an'ny mpanjifa